Ciidamada Amisom oo dilay haweeney 82 jir ahayd | Baydhabo Online
Ciidamada Amisom oo dilay haweeney 82 jir ahayd
Ciidamada Midowga Afrika, ayaa gelinkii dambe ee shalay dad rayid ahaa ku dilay Gobolka Shabellaha Hoose, ka dib markii lala eegtay qarax hareeraha wadada ku aasnaa.
Ciidamada Amisom, ayaa gudaha u galay guryo ku yaala Deegaanka Fitadheer ee duleedka Degmada Baraawe, iyagoona ku dilay laba qof oo dumar ahaa, oo midi ay ahayd haweeney 82 jir ah, iyadoo midda labaad oo 22 jir ahaydna, ay ahayd gabar araga la’.
Ciidamada Amisom oo watay gaadiidka dagaalka, kana amba baxay Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa la sheegay in ay ku sii jeedeen Deegaanka Ambareeso, oo dhaca duleedka Baraawe.
Xildhibaanad Faaduma C/raxmaan Guulwade oo ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Koonfur Galbeed, ayaa sheegtay in Ciidamada Amisom ay ka badbaadeen qaraxaasi, isla-markaana ay ku leexdeen dadkii deegaanka, oo qaarkood ay dhibaateeyen.
Xildhibaanad Faaduma C/raxmaan Guulwade, ayaa Ciidamada Amisom ku eedeysay in ay si arxandarro leh u dileen haweeney 82 jir ahayd, ka dib markii ay sariirteeda ugu dul taggeen, sidoo kalana ay goobtaasi ku dileen gabar araga la’eed.
Iyadoo la hadleysay Idaacadda Shabelle, ayay sheegtay in ay jiraan dad ku dhaawacmay rasaastii ay fureen Ciidamada Amisom, iyadoo intaa ku dartay in ay jiraan dad nolol iyo geeri midna aan lagu hayn.
Marwo Faaduma C/raxmaan, ayaa Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha Somaliya ugu baaqday in ay jawaab deg deg ahi ka bixiyan dhibaatada tan ugu dambeysay, ee Amisom ka gaysatay Gobolka Shabellaha Hoose.
Gobolka Shabellaha Hoose, ayaa waxaa ku soo noq noqday dhacdooyinka foosha xun, ee ay ka gaysanayan Ciidamada Amisom, tiiyoo aanay illaa iyo hadda muuqan dowlad kala xisaabtameysa.